Ukubala Iinguqu zeePesenti: Ukwandisa nokunciphisa
Ukongezwa kwamaphesenti kunye neepesenti kwehla zimbini iintlobo zeenguqu zepesenti, ezisetyenziselwa ukubonisa umlinganiselo wendlela ixabiso lokuqala elifanisa ngayo nomphumo wenguqu kwixabiso. Kulo, ipesenti yehla isilinganisi esichaza ukwehla kwenani lentengo ngezinga elithile ngelixa ipesenti yokunyuswa yinkcitho echaza ukwanda kwintengo yento ngezinga elithile.
Indlela elula yokufumana ukuba ingeniso yepesenti okanye ukunyuka kukubala ukubala umahluko phakathi kwexabiso langaphambili kunye nexabiso eliseleyo ukufumana utshintsho ngoko kwahlula utshintsho ngexabiso loqobo kunye nokwandisa iziphumo ezili-100 ukufumana ipesenteji - ukuba inani elibangela ukuba lihle, ukutshintshwa kwenyuka ipesenti, kodwa ukuba akukho nto, utshintsho lwepesenti luyancipha.
Iinguqu zeepesenti zixhamla kakhulu kwihlabathi lenene-ngokubala ukungafani kumanani abathengi kwisitoreji sakho imihla ngemihla ukubala ukuba ungakanani imali oza kuyisindisa kwi-20-percent-off sale sale.
Ukuqonda indlela yokubala iinguqu zeentengo
Kungakhathaliseki ukuba kunyuka ipesenti okanye ipesenti iyancipha, ukwazi ukubala izinto ezahlukeneyo zepesenti yokuguqulela ifom ziya kunceda ukuxazulula iingxaki zamatriki zemihla ngemihla ezihambelana neenguqu zepesenti.
Ngokomzekelo, thabatha ivenkile edla ngokuthengisa ii-apula ngeedola ezintathu, kodwa ngelinye ilanga ligqiba ukuzithengisa idola kunye neekenti ezingama-80. Ukubala ukutshintsha kweepesenti, esikubonayo ipesenti yehla ukusuka kwi-$ 3 ingaphezu kwe-$ 1.80, kufuneka kuqala siwususe isixa esitsha kwi-original ($ 1.20), uze uhlule utshintsho ngemali yokuqala (.40). Ukuze sibone ukutshintsha kweepesenti, siza kuphinda sande lesi siqingatha ngo-100 ukwenzela ukuba sibe ngama-40 ekhulwini, yipesenti yenani elipheleleyo inani eliye lahla kwivenkile.
Inqununu yesikolo othelekisa ukuhamba kwabafundi kwi-semester enye ukuya kwelinye okanye kwinkampani yefowuni ethelekisa nombolo ye-Februwari imiyalezo ukuya kuMashi imiyalezo ebhaliweyo kuya kufuneka iqonde indlela yokubala ipesenti ukuguqulwa ukuze kuchane ingxelo ngokuchanekileyo ukuhamba nokuthumela imiyalezo.
Ukuqonda indlela yokusebenzisa iinguqu zePesenti kwiiMilinganiselo zokuPhatha
Kwezinye iimeko, ipesenti yehla okanye yanda iyaziwa, kodwa ixabiso elitsha alikho. Oku kuya kwenzeka ngokuphindaphindiweyo kungekhona kwiivenkile zesebe ezibeka iimpahla ezithengiswayo kodwa azifuni ukukhangisa ixabiso elitsha okanye kwiikononi zeempahla ezahlukileyo ngamaxabiso.
Thatha umzekelo ivenkile yesigxina efuna ukuthengisa i-laptop kwiklasi yekholeji nge-$ 600 ngelixa i-electronics store esondelelene izithembisa ukulingana nokunciphisa intengo yimuphi umqhubi-mpahla ngama-20 ekhulwini. Umfundi uya kufuna ngokucacileyo ukukhetha isitoreji se-electronics, kodwa ingaba umfundi uza kusindisa kangakanani?
Ukuze ubale oku, phinda inombolo yokuqala (i-$ 600) ngenguqu yepesenti (.20) ukuze ufumane imali ehlawulelwe (i-$ 120). Ukufumana inani elitsha, umane ususe inani eliyaphupha ukusuka kwinombolo yokuqala ukuba ubone ukuba umfundi wekholeji uya kuchitha i-$ 480 kwisevenkile ye-elektroniki.
Uqeqesho olongezelelweyo lwePesenti yeTshintsho
Kulolu hlobo lulandelayo, bala inani lentengo kunye nexabiso lokuthengisa lokugqibela kunye nesaphulelo esisetyenzisiweyo:
I-silk blouse ihlala ibiza i-$ 45. Kuthengiswa kwi-33%.
Isikhwama sesikhumba sihlawula i-$ 84. Kuthengiswa u-25%.
Iqabunga lihlala libiza i-$ 85. Kuthengiswa ngo-15%.
I-sundress ihlawule iindleko ezingama-30. Kuthengiswa ngo-10%.
I-silk romper romper ihlawule iindleko ezingama-250. Kuthengiswa ngo-40%.
Iindlovu zeesibini zeesetyhini zihlala zibiza i-$ 90. Kuthengiswa ngo-60%.
Isiketi seentyatyambo sihlawula iindleko ezingama-240. Kuthengiswa ngo-50%.
Hlola iimpendulo zakho, kwakunye nezicwangciso zokubala ipesenti, zilapha:
Isaphulelo ngu-$ 15 ngenxa yokuba (.33) * i-$ 45 = $ 15, oku kuthetha ukuba intengo yokuthengisa i-$ 30.
Isaphulelo singama-$ 21 kuba (.25) * $ 84 = $ 21, oku kuthetha ukuba intengo yokuthengisa i-$ 63.
Isaphulelo si $ 12.75 ngenxa yokuba (.15) * $ 85 = $ 12.75, oku kuthetha ukuba intengo yokuthengisa i-$ 72.25.
Isaphulelo yi-$ 3 kuba (.10) * $ 30 = $ 3, oko kuthetha ukuba intengo yokuthengisa i-$ 27.
Isaphulelo i-$ 100 kuba (.40) * i-$ 250 = $ 100, oku kuthetha ukuba intengo yokuthengisa i-$ 150.
Isaphulelo si $ 54 kuba (.60) * $ 90 = $ 54, oku kuthetha ukuba intengo yokuthengisa i-$ 36.
Isaphulelo i-$ 120 kuba (.50) * $ 240 = $ 120, oku kuthetha ukuba intengo yokuthengisa i-$ 120.
I-10 yezona ziHlomelo zeSewula ze-'South Park '
Ukuhlaziywa komkhiqizo: I-Rain-X Latitude Wipers
Ukuguqulwa kohlobo lweenkcukacha kunye nokuDatha kwi-VB.NET
Uhlalutyo lwe-Rhetorical of Claude McKay 'Afrika'
Yintoni iHindu Calendar System?
Yonke Imayelana nePlanter Plate Imida
I-Hercules Hero Hero Hero yafa njani?
Ukuqonda i-Sociological Term "I-Life Course Perspective"
I-French Conundrum yase-Entrez-vous
Abagijimi bee-Olimpiki bexesha elidlulileyo - Baphi?
Ukuchonga iiConifers ngeZixhobo zabo